Fampidirana: iray-lalana clutch dia milina singa mba hahatratra ny asa-tena clutch. Izany dia fototra ampahany electromechanical fiara amin'ny alalan'ny fampiasana ny hafainganam-pandeha na ny fihodinan'ny fiovana fitarihan 'ny mpanao ampahany na noroahina. Ny fifandraisana teny Mizara ho: fifandraisana manan-danja, bolt fifandraisana, pulley fifandraisana, rojo kodia fifandraisana, etc .. Ny tena asany dia ny hisorohana ny mifamadika, marina toerany, Torque fifindran'ny na manapaka Torque. Noho izany, ny atao hoe koa backstop na iray-lalana mitondra ...
Iray-lalana clutch dia milina singa mba hahatratra ny asa-tena clutch. Izany dia fototra ampahany electromechanical fiara amin'ny alalan'ny fampiasana ny hafainganam-pandeha na ny fihodinan'ny fiovana fitarihan 'ny mpanao ampahany na noroahina. Ny fifandraisana teny Mizara ho: fifandraisana manan-danja, bolt fifandraisana, pulley fifandraisana, rojo kodia fifandraisana, etc .. Ny tena asany dia ny hisorohana ny mifamadika, marina toerany, Torque fifindran'ny na manapaka Torque. Noho izany, ny atao hoe koa backstop na iray-lalana bearings.
Fampiharana: fiara mandeha ho azy fifindran'ny, môtô herinaratra fiandohana, milina fitaovana, fonosana milina, milina fanontam-pirinty, ary ny hafa hazavana fitaovana mekanika fandefasana.
Manaraka: aluminium baolina
Clutch Fa Motorcycle
Nalaina Cup Roller Clutch
iray Way Clutch
Sprag Clutch jaza